बिगतको ख्याती, कार्यशैली र म प्रतिको विश्वासले अवसर पाएकी हुँ : नायिका शिल्पा पोखरेल – Namaste Filmy
बिगतको ख्याती, कार्यशैली र म प्रतिको विश्वासले अवसर पाएकी हुँ : नायिका शिल्पा पोखरेल
राजेन्द्र काकीं ।
छविराज प्रोड्क्सन हाउसमा निमार्ण भएको चलचित्र लज्जाबाट डेब्यू गरेकी नायिका शिल्पा पोखरेले १ सय ५० भन्दा अधिक म्यूजिक भिडियोमा मोडलको रोल प्ले गर्नु भइसकेकी छिन् । सफल निर्देशक नवल नेपालद्धारा निर्देशित पछिल्लो चलचित्र लज्जामा चर्चित नायक आर्यन सिग्देलसँग उनी नायिकाको भूमिकामा देखिंदै छिन् । झट्ट उहाँको तस्विरमा लुक्स् रेखा थापा जस्तो देखिने भएतापनि आफुलाई अहिल्यै उहाँको स्थान र चर्चासँग दाँज्न नसुहाउने भएकोले यो प्रशंग पट्टकै मन पर्दैन भन्नु हुन्छ । लज्जाको प्याक अप पछि धेरै नै उत्साहि, रोमान्चित र चलचित्र क्षेत्र प्रति आफु निक्कै नै आशावादी रहेकी पनि बताउनु भएको छ । उनै बिराटनगरकी स्थायी बासिन्दा मोडल तथा नवनायिका पोखरेलसँगको कुराकानीको संक्षिप्त अंश प्रस्तुत गरिएको छ ः
प्रश्न ः हिजोआज के गरी रहनु भएको छ ?
उत्तर ः छवीराज दाज्युको लगानीमा निमार्ण भएको र नवल नेपाल सरद्धारा निर्देशित चलचित्र लज्जाको प्याक अप पछि आराम गरिरहेकी छु ।
प्रश्न ः प्रोडक्सन हाउस, निर्देशक, नायक सबै अब्बल दर्जाकाहरु सँग काम गर्ने संयोक मिलेको छ, कस्तो अनुभव बटुल्नु भयो त ?
उत्तर ः हो, वास्तवमा यो अवसरका लागि मैले आफुलाई भाग्यमानी ठानेकी छु । छवीराज प्रोडक्सन हाउससँग अनुबन्धित भएर, अनि सरल, शिष्ट, अभिभावक जस्ता सफल निर्देशक नवल नेपालका साथै नेपाली चलचित्र क्षेत्रका अब्बल कहलिएका नायक आर्यन सिग्देलसँग काम गर्न पाउँदा जस्तो खुशी त के हुन सक्छ र १ यसबाट धेरै नै उत्साहित, रोमान्चित अनि आशावादी पनि रहेकी छु । यस चलचित्रबाट राम्रो अनुभव बटुल्नुका साथै चलचित्र क्षेत्रमा मेरो भविष्यको पनि राम्रो संकेत देखेकी छु ।
प्रश्न ः तपाईलाई त रेखा थापा जस्तो लुक्स भएकोले छवीराज ओझाले अनुबन्धित गरिएको सुनिन्छ नी ?
उत्तर ः मैले १ सय ५० भन्दा बडी म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी छु । म्यूजिक भिडियोको क्षेत्रमा राम्रो नाम, दाम आर्जन गर्नुका साथै आफ्नो छवीलाई समेत राम्रो बनाउन सफल भएकी छु । त्यसको क्रेडिटका कारण पनि मैले लज्जामा अवसर पाएकी हो भन्ने ठानेकी छु । मलाई रेखा थापा जस्तो देखिएको कारण स्थान दिनु भएको भन्नेमा म विश्वास गर्दिन । बिगतमा मैले म्यूजिक भिडियाबाट आर्जन गरेको ख्याती, कार्यशैली र म प्रतिको विश्वासले नै अवसर दिनु भएको हो भन्ने लागेको छ । प्रश्न ः नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सुपर नायिका रेखा थापासँग तपाईको नाम जोडिन्दा त बडो आनन्द महसुस गर्नु हुन्छ होला, होइन ?
उत्तर ः होइन, मलाई उहाँ जस्तो नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सुपर नायिकासँग नाम जोडेर आएका प्रशंगहरु पट्टकै मन परेको छैन । उहाँ सँग मेरो अहिले तुलना हुन पनि सक्दैन् । कसैले मलाई रेखा थापा जस्तो देखे होलान वा देखदैन पनि होलान । त्यो अर्कै कुरा हो । भविष्यमा मैले लज्जामा जस्तै अब्बल दर्जाका सिनेकर्मीहरुसँग सन्तुष्टरुपमा काम गर्ने अवसर पाइरहेछु भने कुनै दिन म उहाँको स्थानमा पुग्न सकौला । तर मैले आफुलाई रेखा थापा जस्तो भनेकी पनि छैन म शिल्पा पोखरेल नै हुँ र शिल्पा पोखरेल नै बन्न चाहन्छु । उहाँले मेरो उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै आर्शिवाद दिनु भएको छ । म रेखा थापालाई सम्मान गर्दछु ।
प्रश्न ः अब म्यूजिक भिडियोमा समय दिनु हुन्छ की ठुलो पर्दालाई ?
उत्तर ः निश्चिय पनि सबैको उत्तर ठूलो पर्दालाई नै हुन सक्छ । म पनि त्यहि भन्छु । तर सेलेक्टेड म्यूजिक भिडियोको लागि आएको अवसर भने गुमाउने बिचारमा छैन ।
प्रश्न ः नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जम्न त नायिकाहरुलाई धेरै कुराहरुको त्याग र समर्पण गर्नु पर्दछ भन्छन्, कसरी रेखा थापाको स्थानमा पुग्ने बिचार गरिरहनु भएको छ त ?
उत्तर ः वास्तवमा नेपाली चलचित्र क्षेत्र नायिका तथा महिला कलाकारहरुको संन्र्दभमा ज्यादै नै आलोचित र टिकाटिप्णी हुँदै आइरहेको छ । यो ज्यादै नै दुखद घटना हो । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको एउटा दुर्भाग्य पनि हो । साथै यसले ब्यापकता पाउँदै गएको मेरो पनि अनुभूति रहेको छ । तर आफ्नो कार्यको सफल सम्पादन, आत्मविश्वास छ र अरुको खुशामत गर्नु छैन भने पक्कै पनि त्यस्ता घृणितहरुको चंगुलमा फस्नु पर्दैन भन्ने विश्वास लिएको छु । उत्कृष्ट अभिनय प्रस्तुत गर्दै इमान्दार र स्वच्छ भएर नै यस क्षेत्रमा स्थापित हुने विश्वास लिएकी छु ।
प्रश्न ः चलचित्र लज्जा मार्फत दर्शक माझ कस्तो भूमिकामा देखिनु हुन्छ ।
उत्तर ः हाम्रो समाजमा, कार्यालयमा, सवारी साधनमा यात्रा गर्दा, एक्लै–दुक्लै हिड्दा वा अन्य विषय प्रशंगहरुमा पनि पुरुषहरुद्धारा महिला माथी गरिने “सेक्सुएल ह्रास्मेन्ट”को मैले खुलेर प्रतिवाद गरेको देखिनु हुन्छ ।
प्रश्न ः अन्त्यमा कसैलाई केहि भन्न चाहनु हुन्छ ।
उत्तर ः सर्व प्रथम त चलचित्रमा अवसर दिने छवीराज दाज्यु, अभिभावक जस्तो सफल निर्देशक नवल नेपाल सर लाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु । सुटिङ्गको दौरानमा मेरो कार्य सम्पादनलाई सरल तूल्याउन मलाई सहयोग पु¥याउँनु हुने नायक आर्यन सिग्देलजी लगायतका चलचित्र युनिट प्रति नै हार्दिक कृतज्ञता साथै आभार ब्यक्त गर्न चाहन्छु । साथसाथै आदरणिय दर्शक, शुभचिन्तकहरुलाई मेरो ठूलो पर्दाको अभिनित पहिलो चलचित्र “लज्जा” हेरिदिनु भई मलाई अझै उत्साही बनाईदिनु हुन बिन्रम अनुरोध गर्न चाहन्छु । तपाईलाई पनि धन्यवाद
दिपक खांडको पिरती छुटेको कुरा